Yeyiphi intengiso ezintathu eziphambili zeemveliso ze-tungsten carbide?
Yeyiphi intengiso ezintathu eziphambili zeemveliso ze-tungsten carbide ngoku? Amalungu e-alloy eqinile ahlala kwiimoto, ezonyango, kwimarike yamandla amatsha, uyakholelwa? Ngaba uyayazi? Ndicela ndikwazise namhlanje. Isetyenziswa ikakhulu kwintsimi yeemoto. Emva kokubumba, i-sintering, isinyithi okanye i-alloy pow...
Intengiso iPhumelele eNqabeni eliPhezulu ngo-2015
ngu admin on 20-11-25
Ngo-2015, ejongene noxinzelelo olukhulayo lokudodobala koqoqosho kunye nokuwa okubukhali kwixabiso lezinto eziphathekayo kunye nezinye izinto ezimbi, i-Nanchang Cemented Carbide LLC yaqhubela phambili imanyene, ayizange ithandabuze kwaye ingaphenduli kwabanye ukuba bafune uphuhliso. Kwangaphakathi, iphucule ulawulo kunye q...
Ukuthengiswa kweNkampani kuNyusa ngokuchasene neMfuno ebuthathaka kwisiqingatha sokuqala salo nyaka
Ukususela ekuqaleni kwe-2014, amaxabiso ezinto eziluhlaza ze-tungsten agcinwe ehla, imeko yemarike ikwimeko emdaka kungakhathaliseki ukuba kwiimarike zasekhaya okanye kwiimarike zaphesheya, imfuno ibuthathaka kakhulu. Ishishini lonke libonakala lisebusika obubandayo. Ukujongana nemeko yemarike enzima, ...
INanchang Cemented Carbide LLC(NCC) yenye yeenkampani eziphambili kwintsimi yeTungsten Carbide eChina. Sigxile ekwenziweni kwemveliso yeTungsten. NgoJulayi ka-2010, uMongameli wase-US uBarack Obama watyikitya “uMthetho woHlaziyo lweDodd-Frank Wall Street kunye noKhuseleko lwaBathengi” oquka icandelo 1502(b) kwi ...
Milling Cutter, Isixhobo seCarbide, Carbide Precision Tools, ICarbide enesamente, Izixhobo zeCarbide, IiMill zokuphela kweCarbide,